Igumbi loYilo leMetro Garbatella - I-Airbnb
Igumbi loYilo leMetro Garbatella
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguFabrizio
Igumbi eliphindwe kabini kwi-B&b esandula ukulungiswa ngoyilo lwangoku.
Ifakwe kwisithili saseGarbatella phambi kwesikhululo sikaMetro, inebhafu yabucala ngaphakathi kwigumbi, kunye nazo zonke izinto ezinje nge-wi-fi, umoya wokupholisa umoya, ukufudumeza, i-smart TV LED 40 intshi.
Igumbi lokushiya ekwabelwana ngalo/indawo yokusebenza, ibalcony kunye nekhitshi ziyafumaneka emini.
Kukho amagumbi ama-3 ahlukeneyo, ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala. Jonga kwiprofayile yam ukuba ufuna ukubona amanye amagumbi eendwendwe zikaGarbatella
Ipholile kwaye yanamhlanje isanda kuvulwa iB&B kwisithili esiyimbali saseGarbatella, amanyathelo nje ukusuka kwezona ndawo ziphambili zobomi bokhenketho kunye nenkcubeko yeLikomkhulu. I-B&B, brend new, ibekwe kwisakhiwo seminyaka yee-'60s nje phambi kwebhulorho yangoku kunye nedumileyo, enelifti kwaye izidla ngokuphakama: iimitha ezingama-50 ukusuka kwindawo yokumisa i-metro Garbatella kunye ne-600 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe sase-Ostiense (imizuzu engama-30 nge uloliwe osuka eFIUMICINO AIRPORT), kufutshane neTestaccio kunye neTrastevere, imizuzu embalwa ukusuka kwiDolophu eNdala ifikeleleka lula ngeenyawo. Ngokufikelela kakuhle kuloliwe wesikhululo seenqwelomoya, izikhululo zikaloliwe, iilwandle ezigudle unxweme, iNew Fair yaseRoma; Ihanjiswa ngemigca yebhasi emininzi, nasebusuku. Imizuzu emi-5 ngonyawo ukusuka e-Eataly
I-B&B inamagumbi ama-4. Ngamnye uhlotshiswe kwisitayela esahlukileyo kunye nokuqwalaselwa kweenkcukacha. Baxhotyiswe ngebhafu yangasese, ngaphakathi kwegumbi, kunye nazo zonke izinto ezincedo ezifana ne-wi-fi, i-air conditioning, ukufudumeza, i-smart TV LED 40 intshi. Ixabiso legumbi libandakanya ithuba lokusebenzisa ikhitshi ekwabelwanayo ngalo, umatshini wokuhlamba kunye negumbi lokuhlala elipholileyo elinebalcony.